Boliiska Canada oo dilay muwaaddin Soomaaliyeed. - Wargeyska Faafiye
Boliiska Canada oo dilay muwaaddin Soomaaliyeed.
Ottawa-Canada- Boqolaal qof oo ka caraysan dilka wiil Soomaali ah ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha magaalada Ottawa ee dalka kanada,markii la xaqiijiyay iney Boliisku dileen C/raxmaan Cabdi oo ahaa muwaaddin Soomaaliyeed.
Filed in: .Warka Tags: dilka wiil soomaali ah
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsOpen letter to al-Zawahiri rocks foundations of al-Shabaab.Hargeysa: Dhaawaca gudoomiyaha maxkamada.Saraakiil ka socota UNHCR oo tagtay GaalkacyoKismaayo: Dab qasaaro geestayNetanyahu oo dalbaday in IRAN loo midoobo.